Yan Aung: အို.ဘယ့် နိုင်ငံခြား...
အစ်ကိုကြီး ရေးလိုက်တာကို ဖတ်လိုက်ရတာမောသွားတယ် ။ ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတာက အစ်ကိုကြီးနဲ့ယှဉ်ရင် တခြားဆီပဲနော်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်မှာ အားပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာပါပြောခဲ့ပါရစေ။
အဟတ်.. ဘယ်သူလုပ်တာပါလိမ့်.. တော်တော်ဆိုးတဲ့
မ၀ါပဲနော်. လူတွေကို ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတယ်.း))
ဖတ်လိုက်ရတာ အရမ်းရယ်ရသလို နောက်ဆုံးပိုင်း
ရောက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..း) ဒါပေမယ့်
ရယ်ချင်နေတော့ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလိုက်
သားတွေကို ထိုင်ဖတ်ပြီး တကယ်ပဲလေးစားခင်မင်စွာ
ဆူရှီိလား.. ကျွန်မလည်းလိပ် ဖူးတာပဲ ပျော်စရာကြီး..
ဆူရှီတွေလုပ်လို့ပိုသွားရင် အလကားစားရလို့ မမှားမှား
အောင်ကို ပိုပြီးလုပ်တာလေ.. အဟတ်... စတာပါ.
တကယ်မဟုတ်ဖူး.. စာရင်းမှားပြီး ခဏခဏကိုပိုတာ..
ပိုပါစေ..သူဌေးကဌေးပြီးသားပဲ. မဌေးတဲ့သူတွေစားရ တာပေါ့.. အဲလိုကိုစေတနာရှိတာ....း))))
. ဒါရှက်စရာမှမဟုတ်တာ.. ဘ၀ရဲ့အမှတ်တရလေးတွေ
ပေါ့ မောင်ရန်အောင် ရယ်.. မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်
ပြီး ပိုက်ဆံရှာနိုင်တာ ဘယ်သူတွေ အထင်သေးသေး
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဂုဏ်ယူတယ်. “ငါပိုက်ဆံရှာနိုင်တယ် ၊ ငါ့မိဘကို လုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ကွ.”ဆိုပြီးတော့လေ.
တက်ဂ်ပို့စ်အရှည်ကြီး ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးတကယ်
တင်မိပါတယ်.. ဖတ်လို့ တကယ်ကောင်းပါတယ်..
ဒါနဲ့ မောင်ရန်အောင် ပိုက်ဆံသယ်လာနည်းက အတုယူ
သွားကြတော့မှာပေါ့... နောက်ကျရင် လေဆိပ်မှာ ခြေ
အိပ်ပါချွတ်ခိုင်းနေရင်တော့ မောင်ရန်အောင် တရားခံပဲ.
၂၀၁၀ နယူးရီးယ.ကျရင်တော့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ
မောင်ရန်အောင်ကိုမြင်ဘူးရလေအောင် ထပ်မံပြီး ရီကွက်လုပ်ရပါလိမ်မယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်အကြောင်း
ဒါနဲ့ မနော်က ထုတ်ဝေသူလုပ်မလို့ဆိုပါလား.. ကျွန်မပါ
မနော်နဲ့ ရှယ်ထားလိုက်မယ်. အဟတ်..ရတယ် အေးဆေး သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က ခမည်းခမက်တွေ.း))))
အကိုရေ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ.. အတော့်ကို ရုန်းကန်ရတဲ့ ဘ၀တွေပါ.. အစစအရာအရာ အဆင်ပြေနေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကျနော်ကိုလဲ ဆုတောင်းပေးဦးနော့် အဟတ်ဟတ် (အကိုနားက ငှါးသုံးလိုက်တယ်)
ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်က ခုတောင် ခံစားရတယ် မဟုတ်လား ကိုရန်လေးရဲ့..
ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အမြန်ရောက်ပါစေ...
ကျွန်တော် စလုံးလာတုန်းကတော့ ကတ်ထူစက္ကူနဲ့ ပတ်ပြီး ဖိနပ်ထိပ်ကို ထိုးထည့်ထားတယ်။ လက်နဲ့ နှိုက်ထုတ်မှ ရတယ်။
ကိုရန်အောင် စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်မယ်ဆို စောင့်ဖတ်မယ်။ ဂယ် ထုတ်မှာလား?
အစ အဆုံး နောက်တစ်ခေါက်လာထပ်ဖတ်သွားတယ်
ကျန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရဇာတ်လမ်း
အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ကန်ယိုရေ... အဲလေ ကိုရန်ရေ...
ဟတ်ဟတ်. (ကိုရန်ရယ်သလို လိုက်ရယ်ကြည့်တာ.)
ဒီလိုပါပဲ. နိုင်ငံခြားမှာနေရတဲ့ ဘ၀တွေဟာ မုန့်ပျားသလက်ပေါ်မှာ ငရုတ်ကောင်းဖြူးထားသလိုပါပဲ..
စကားမစပ်... မ၀ါပြောသလို ဓာတ်ပုံ ဘယ်တော့တင်မှာလဲ. လူပျိုကြီးရေ...
နောက်တာပါ. နှစ် ၂၀ ပို့စ်လေး ဖတ်ချင်ပါတယ်. ရေးပေးပါနော်. မ မပါရင် မနေရ...
ပြောရဦးမယ်. ဒီလိုရိုက်တတ်ဖို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းရတယ် သိလား. ဒါပါပဲ. နောက်ဆို မကြာမကြာ လာရေးမယ်. ဘိုင်ဘိုင်.
ကိုရန်ရေ.. ခုမှပဲ မန့်ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ဘ၀ကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းရတဲ့ အခက်အခဲတွေချင်း ဆင်ပေမဲ့ ကိုရန်က့ျါန်တော်ဆို့ထက် အဆပေါင်းများစွာ သာပါတယ်ဗျာ။ လေးစားချီးကျူး အားကျလျက်ပါ။
ကိုရန် .. အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
blog ပွင့်ထွက်မသွားပေမယ့်.. ဘလော့ဂ်လောကကို ကျောခိုင်းပြီး ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့ လေးမ ပါးစပ်.. အဲလေ.. လက်တော့ ပွင့်ထွက်သွားတယ်..။ ဒီပို့ စ်ဖတ်ရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမ်ငယ်မိတယ်..။ ကျောင်းပြန်တက်ချင်လာတယ်..။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကြည့်ချင်လာတယ်.။
ကိုရန်အောင်ရေ .. အတွေ့အကြုံရှည်ကြီးတစ်ခုကို သေချာဖတ်ပြီး ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ “ဘ၀”ဆိုတဲ့ ခရီးလမ်းကြီးပေါ်မှာ ပိုမို ကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ အေးချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ :)
ဘယ်တုန်းက ရေးထားတာလဲ တော့ မသိဘူး..ဒါပေမယ့် ခု မှ ဖတ်ဖြစ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး.... ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရတာလေး တွေကို ရီစရာ မောစရာ အဖြစ်ရေးပြသွားတာ လေးစားပါတယ်..အောင်မြင်ပါစေ ရှင်